Activities | RecyGlo | Myanmar (Burma)
Road to Green Environment
--------------English Version Below------------ အမှိုက်ခွဲခြားစွန့်ပစ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးနဲ့ရလဒ်တွေကို မျှဝေအကြံပြုပါရစေ အမှိုက်တွေကို ခွဲခြားစွန့်ပစ်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ ခွဲခြားစွန့်ပစ်ဖို့ နည်းလမ်းတွေကို တစ်စိတ်တစ်ဝက် သိပြီးကြပြီဆိုတော့ အမှိုက်တွေကို ခွဲခြားစွန့်ပစ်လိုက်တာက ဘယ်လိုမျိူးအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်လဲဆိုတာကို RecyGlo ကိုချစ်မြတ်နိုးသူတွေ၊ အားပေးနေတဲ့သူတွေအတွက် ဗဟုသုတလည်းရ၊ တကယ်လည်းလက်တွေ့မှာကျင့်သုံးနိုင်အောင် ပြောပြပေးသွားမယ်နော်။ ***သင်သာ အမှိုက်တွေကို သေချာခွဲခြား
Do You Know Where Plastic Lumbers Can Be Used?
------------English Version Below------------- Plastic Lumber တွေကို ဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးလို့ရလဲဆိုတာ သိကြလား? အခုဆိုရင် တော်တော်များများက Sustainable ဖြစ်တဲ့ decorations တွေကို အသုံးပြုလာကြတဲ့အတွက် Plastic Lumbers တွေကို သုံးပြီး ပြုလုပ်ထားတဲ့ အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ decorations တွေကို နေရာတော်တော်များများမှာ တွေ့မြင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ Plastic Lumbers တွေကို အလှဆင်တဲ့နေရာတွေနဲ့ စားပွဲခုံ ထိုင်ခုံတွေသာမကပဲ တခြားနေရာအမျိုးမျိုးမှာလည်း အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတာကို မသိသေးတဲ့သူတွေအတွ
The Purpose of Sustainable Decoration
------English Version Below------ ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ဒီဇိုင်း ဆိုတာဘာလဲ? (Sustainable Design) ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ဒီဇိုင်း (Sustainable Design) ဆိုတာက အရာဝတ္ထုတွေကိုတီထွင်ဖန်တီးစေတတ်ခြင်း၊ တည်ရှိပြီးသား ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အတူ လူမှုရေး၊စီးပွားရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ရှုထောင့်ကနေဖန်တီးပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့အတူ ဂေဟစနစ်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် ကိုက်ညီတဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းတွေကိုဆိုလိုပါတယ်။ ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ဒီဇိုင်း (Sustainable Design) ကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သက်ဆိုင်တဲ့ဒီဇိ
Dry-Cell Battery Recycling
မဲထည့်နေတာ မဟုတ်ပါဘူးနော် ဓာတ်ခဲတွေကို စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ဖို့ Battery Recycling Drop-off ပုံးထဲ စနစ်တကျ ထည့်နေတာပါ ခင်ဗျ သုံးပြီးသား ဓါတ်ခဲခြောက် Dry-Cell Battery တွေကို စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ RecyGlo ရဲ့ Battery Recycling Service ကို သတိရလိုက်ပါ။ www.recyglo.com ကနေ MPU, Kpay စတဲ့ အွန်လိုင်း ငွေပေးချေ စနစ်တွေနဲ့ မှာယူလို့ ရပါပြီ။ ဝယ်ယူပြီးတာနဲ့ (၇) ရက်အတွင်းအိမ်တိုင်ရာရောက် ပို့ပေးပါတယ် ခင်ဗျ အသေးစိတ်ကို ဒီလင့်မှာ လေ့လာလို့ ရပါတယ်။ https://www.facebook.com/recyglo/p
Benefits of Using Plastic Lumbers
--------English Version Below--------- Plastic Lumber တွေကို သုံးခြင်းအားဖြင့် ရနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို သိကြလား? Plastic Lumber ဆိုတာဘာလဲသိပြီးကြပြီဆိုတော့ သူတို့တွေကို သုံးခြင်းအားဖြင့် ရနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ပြောပြပေးသွားမှာပါ။ Plastic Lumber တွေက သန့်ရှင်းပြီး သစ်သားထက်ကြာရှည်ခံပြီး ပိုးပေါက်တာမျိုးတွေမဖြစ်တဲ့အတွက် အခုဆိုရင် သစ်သားအစားထိုးအနေနှင့် အသုံးပြုမှုများလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကို sustainable decorations အရလည်း အသုံးပြုဖို့ အကြံပြ
-———-English Version Below————— သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပညာရပ် (Environmental Education) ဆိုတာဘာလဲသိကြလား? သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အသိပေးပညာရပ် (Environmental Education) ဆိုတာကတော့ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းဆီအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိတဲ့ပြဿနာတွေ၊ ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့နည်းလမ်းရှာဖွေခြင်းများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် တိုးတက်မြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းမှုတွေကို နားလည်သိရှိစေနိုင်တဲ့ ဖြစ်စဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်အနေနှင့်ပြောရမယ်ဆိုရင် Environmental Education ဆိုတာက လူတစ်ဦးတ
E-Waste Destruction and Recycling
---------English Version Below----------- ကိုယ်အသုံးမပြုတော့တဲ့ စွန့်ပစ်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေကို အမှိုက်ပုံတွေမှာ စွန့်ပစ်နေကြတုန်းလား (သို့) ဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမလဲဆိုတာကို တွေ‌ဝေနေရတုန်းလား? အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေမှာပါဝ◌င်တဲ့ ခဲနှင့် မာကျူရီဓါတ်တွေက သဘာဝပတ်ဝ◌န်းကျင်ကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အတွက် အမှိုက်ပုံတွေမှာ ဒီတိုင်းစွန့်ပစ်လိုက်ဖို့ မသင့်တော်ပါဘူး။ အဲဒီ့အပြင် အီလက်ထရောနစ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကနေတစ်ဆင့် သတင်းအချက်အလက်ပေါက်ကြားမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေလျက်ရှိပါတယ်။ ဒီလို အချက်အလက်ပေါက်ကြား
Do You Know What Is Plastic Lumber?
----------English Version Below---------- Plastic Lumber (Recycle Plastic Lumber) ဆိုတာဘာလဲ? Plastic Lumber ဆိုတာကတော့ သစ်သားနှင့် ပုံစံဆင်တူတဲ့ recycle ပြုလုပ်ထားတဲ့ plastic တွေကို ခေါ်ပါတယ်။ သူတို့တွေကိုတော့ သစ်သား၊ ကွန်ကရစ်နှင့် သတ္တုတွေနေရာမှာ အစားထိုးအသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်လုပ်ကြပြီး အမျိုးအစားက ၄ မျိူးရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့ - 1. High Density Polyethylene (HDPE) Recycled Plastic Lumber - ဒီအမျိုးအစား Recycled Plastic Lumber (RPL) တွေကတော့ ပလပ်စတစ်နို့ဘူးအဖြူရော
----------Burmese Version Below--------- How do you usually deal with the destruction of confidential documents? If you haveapile of obsolete documents, it can take up space and clutter up. In addition, it can lead to the leakage of information on unwanted documents or your workplace. It can be inconvenient to sell obsolete or important documents in junk shops because it can damage the branding of the business. If incinerated, it could cause environmental hazards and may ag
------English Version Below------ ဥပဒေချမှတ်သူများနှင့် စွန့်ဦးတီထွင်သူများအပေါ် အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအတွက် ဖြေရှင်းချက်များ ကမ္ဘာ့တောင်သူလယ်သမားများသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ လူ သန်းပေါင်း ၁၀ ဘီလီယံကို လုံလောက်စွာ စားသုံးနိုင်ရန် စားနပ်ရိက္ခာများကို စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ကြပါတယ်။ သို့ပေမဲ့လည်း လူသန်းပေါင်း ၇၅၀ ကတော့ စားနပ်ရိက္ခာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးနေကြပြီး အစားအစာတန်ပေါင်း ၁.၃ ဘီလီယံခန့်ကတော့ စွန့်ပစ်ခံနေရပါတယ်။ အဲဒီ့ပမာဏတွေက ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု၏ လေးပုံတစ်ပုံကို ဖြစ်ပေါ်စေပ
------English Version Below------ "မာကျူရီ၏ အလှကုန်ပစ္စည်းများတွင် ပါဝင်နေမှုများအကြောင်း" မာကျူရီတွေက သွားဖာဆေးများ၊ ပင်လယ်စာအစိမ်းတွေမှ တစ်ဆင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ဝင်ရောက်တတ်တာကို ကြားဖူးကြသလို အလှကုန်ပစ္စည်းတွေမှာလည်း ပါဝင်တတ်တယ်ဆိုတာရော သတိပြုမိကြားလား။ ဟုတ်ပါတယ်။ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေမှာလည်း မာကျူရီဓါတ်ပါဝင်တဲ့ ထုတ်ကုန်တွေရှိပါတယ်။ မာကျူရီအမျိုးအစားတွေထဲမှာဆိုရင် အော်ဂဲနစ်မာကျူရီ‌သာမက အင်န်‌အော်ဂဲနစ်မာကျူရီတွေကိုလည်း အလှကုန်ပစ္စည်းတွေမှာ‌ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အော်ဂဲနစ်မာကျူရီတွေကိုတေ
Types of PPE Gowns
------English Version Below------ PPE တွေမှာလည်း အမျိုးအစားတွေအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အကြောင်းကို ပြောပြပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အခု Covid-19 ကပ်ရောဂါကာလအတွင်းမှာ ဆေးရုံဆေးခန်းများ၊ Covid ကုသရေးစင်တာများ၊ Quarantine စင်တာများနှင့် မြို့နယ်အလိုက် Fever Clinic တွေမှာအသုံးပြုများကြတဲ့ PPE Gowns တွေအကြောင်းကို ပြောပြပေးမယ်နော်။ PPE တွေအကြောင်းမသိသေးတဲ့သူတွေလည်း ဒီ link လေးကနေ ဖတ်လို့ရပါတယ်။ https://www.facebook.com/recyglo/posts/2734604226779685 Gowns ဆိုတာကတော့ ဆေးရုံဆေးခန်းတွေ၊ခွဲစိတ်ခန်းတ
Vectors of Waste in the Food Chain
------Burmese Version Below------ Often when we think about climate pollution, we conclude to direct the opposition to industries, power plants, and transportation. However, we are less aware of one of the most notable contributors to climate pollution: food waste in the food chain. They are the third-biggest emitter of greenhouse gas, followed by industry and transport. To put it into perspective, it releases 13.7 billion metric tons of carbon dioxide annually behind China